Archive du 20170901
Grenady nikendrena an-dRatsiraka Afenimpenina
Nangina tanteraka tsy nisy tohiny intsony ny momba ilay grenady hita teo amin’ny “parking” an’ny minisitry ny fizahantany Roland Ratsiraka ny 28 jona lasa teo.
Toavina Ralambomahay Mila tompon’andraikitra ny vahoaka
Tsy misy azo antenaina ny fanovana minisitra nataon’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampanina farany teo, hoy ny mpandinika ara-politika Toavina Ralambomahay.
Governemantan’i Mahafaly Niady tamin’ny inona marina ?
Naneho ny heviny mikasika ny fahitany ny fanovana governemanta farany teo ihany koa ny antoko Vahoaka Miray na VAMI tamin’ny alalan’ny Sekretera jeneraliny, Gaby Vakiniadiana.
Fampihavanam-pirenena Igagam-bahoaka ny CFM
Mahagaga anay, hoy ry zareo avy eo anivon’ny vovonana politika Dinika ho an’ny Fanavotam-Pirenena, tao amin’ny foiben’ny AKFM Andravoahangy ambony, omaly,
Marc Ravalomanana Henika azy i Madagasikara
Tonga nanotrona ny famaranana ny fihaonambe voalohan’ny seha-pitaizana ao amin'ny Fifohazana FJKM, tanterahina ao Ambatolampy Vakinankaratra, Atoa Marc Ravalomanana omaly alakamisy 31 aogositra 2017.
Taratasin’i Jean Maimbo hatramin’ny farany
Miarahaba anao aho ry Jean ! Rahoviana ihany ianao ity vao tena hidio e e ? Efa ela ihany no nahenoako anao hidio fa hatramin’izao mbola hanaovana fikafika foana.
Tanàna madio sy milamina Miroso amin’ny tanjona Antananarivo Renivohitra
Nanao fanadiovana goavana teny amin’ny faritra Anosy sy ny manodidina ny kaominina Antananarivo Renivohitra omaly alakamisy 31 aogositra 2017,
Eliane Bezaza “Hifamono eto isika”
Diso fanantenana ny olona satria rehefa manao fanovana governemanta dia tokony hisy dikany sy hisy lalan-tsaina hoe
Volley-ball – Tompondakan’i Madagasikara Ho ambohimpihaonana ao Toamasina
Manomboka ny alatsinainy 4 septambra 2017 izao no hanatanterahana any Toamasina ny ho tompondakan’i Madagasikara amin’ny taranja volley-ball sokajy “tanora” U 18 sy U 20 lahy sy vavy.
Rugby à XV Mitohy ireo lalaon’Analamanga
Mbola mitohy avokoa ireo lalao rugby eto Analamanga na dia mitoetra hatrany aza ny disadisa ara-pitantanana.
Kitra – “Champion’s League Malagasy” Lalao 9 no hanombohana azy anio
Lalao 9 be izao no hanombohana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2017 eo amin’ny taranja baolina kitra anio zoma 1 septambra 2017.
Miandry vory vahoaka
Tsy dia re feo indray aloha ny filoham-pirenena tato anatin’ny andro vitsivitsy, indrindra fa taorian’ny nanoloana ny mpikamban’ny governemanta.
BNI Madagascar Miezaka manohana ireo tanora manampahaizana
Miezaka manohana ireo tanora Malagasy manampahaizana ny banky BNI Madagascar, indrindra ho an’ireo nianatra sy nandalina manokana ny resaka banky, efa nahavita fianarana.
Orinasa AAA TIKO Maka ny toerany
Anisan’ireo orinasa nisehatra teo amin’ny famokarana sy fiaraha-miasa amin’ny mpamboly sy mpiomby ny A.A.A TIKO Andranomanelatra.
Pr Radanoara Julien Mandrisika ny tanora hifaninana
Ny 20.000 amin’ireo 75.000 mahery afa-panadinana bakalorea ihany no azon’ny oniversitem-panjakana raisina ho an’ny eto Antananarivo.
Zaridainan’Andohalo Hampiantrano ny “Haify Mampihavana 4”
Raikitra indray ny Haify Mampihavana andiany fahefatra. Ny 30 septambra ho avy izao no hanatanterahana izany eny amin’ny zaridainan’Andohalo, haharitra telo andro.
Ady amin’ny asan-dahalo Nandroso vahaolana ny FIMPIOMBY
Misedra olana ireo mpiompy omby manerana ny foko 18 amin’izao fotoana noho ny tsy fandriampahalemana.